Ebumnuche asaa kpatara ịzụta Smart TV n'echeghị echiche oge ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Ebumnuche 7 ịzụta Smart TV n'echeghị echiche maka oge
Villamandos | | General, TV
Hasntanetị agbanweela ndụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anyị niile n'ọtụtụ ụzọ ma nyekwa anyị ohere ịbawanye ọtụtụ ngwaọrụ. Otu n'ime ha bụ telivishọn, nke ekele maka ọdịdị nke Smart TVs na ahịa emeela ka anyị jikọọ telivishọn anyị na ndụ nke netwọkụ ma nwee obi ụtọ karịa ọ bụghị naanị mmemme telivishọn ndị a na-emebu, kamakwa ọtụtụ ọdịnaya ndị ọzọ ụdị nile.
Ọ bụrụ na ịnweghị Smart TV ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eche ma ị ga-azụta otu n'ime ngwaọrụ ndị a, taa n'isiokwu a anyị ga-egosi gị Ebumnuche 7 ịzụta Smart TV. N'ezie ụfọdụ n'ime ha ga - enyere gị aka ịgba gị ume ịzụrụ ngwaọrụ a yana nhọrọ na ọrụ ọhụụ nke telivishọn ndị a na-enye anyị buru oke ibu.
1 Gịnị bụ Smart TV?
2 YouTube na TV gị n'ụzọ dị mfe
3 Na-achọ telivishọn ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla
4 Na-agagharị n’ Internetntanet na-ahapụghị n’ihe ndina ya
5 Nweta ma netwọkụ mmekọrịta gị
6 Nwee ọtụtụ egwuregwu
7 Ọkụ ọdịnaya ọ bụla
8 Tụgharịa Smart TV gị ka ọ bụrụ ebe mgbasa ozi
9 Mkpebi kpamkpam
Gịnị bụ Smart TV?
Ọtụtụ n'ime unu amata n'ezie ihe Smart TV bụ, mana ọ bụrụ na mmadụ edoghị ya anya, anyị nwere ike ikwu ya ụdị telivishọn bụ ndị na-enye gị ohere ijikọ ha na andntanetị ma ya mere nwere ohere zuru ezu na netwọk nke netwọk. Enwere ike ijikọ telivishọn dị otú ahụ site na eriri netwọk ma ọ bụ na ikuku.
Site na nke a, anyị nwere ike ịgagharị na enjoyntanetị, nwee nnukwu ọdịnaya nke ọtụtụ isi mmalite ma ọ bụ nwee ụfọdụ egwuregwu ma ọ bụ ngwa nke ndị nrụpụta mebere mana ngwaọrụ ndị a.
Ugbu a anyị doro anya banyere ihe Smart TV bụ, anyị ga-enye gị 7 nke ọtụtụ ihe anyị kwenyere na anyị dị taa iji nweta Smart TV. N'ezie, anyị adọọla gị aka na ntị na enwere ọtụtụ ndị ọzọ na ụfọdụ maka nke ị na-ekwesịghị ịzụta ngwaọrụ nke ụdị a, mana ị maralarị na anyị bụ ezigbo ndị na - akwado teknụzụ na ngwaọrụ ọhụụ na - ejikọ na ịntanetị. nke ndị ugbu a anyị ga-agafe.
YouTube na TV gị n'ụzọ dị mfe
YouTube Ọ bụ otu n'ime ọrụ Google kachasị ewu ewu na nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eji kwa ụbọchị iji nwee ọ ofụ nnukwu ọdịnaya nke ụdị niile. Ọ bụrụ na anyị nwere Smart TV anyị nwere ike ịnweta, site na telivishọn anyị na-enweghị iji kọmputa, na YouTube iji kporie vidio egwu, vidio na-atọ ọchị ma ọ bụ vidiyo ọ bụla e tinyere na ikpo okwu a.
Iji nwee ọ YouTubeụ na YouTube anyị nwere ike ịnweta site na ihe nchọgharị ahụ nwere Smart TV arụnyere ma ọ bụ ọbụna nbudata ngwa nke ya site na nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ obere ọrụ Google na-ewu ewu ma na-ahụghị ọdịiche ọ bụla site na mgbe anyị jiri YouTube dịka ọmụmaatụ site na ama anyị.
Na-achọ telivishọn ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla
Ohere ịnweta netwọk nke netwọk sitere na Smart TV ga-enye anyị ohere budata ngwa dị iche iche ọtụtụ netwọkụ telivishọn mepụtara maka ụdị ngwaọrụ a. Site na ngwa ndị a anyị nwere ike ịnụ ụtọ telivishọn na-achọ n'oge ọ bụla na-enweghị agbụ na mgbasa ozi nke ụfọdụ mmemme ma ọ bụ usoro kachasị mma.
Ihe atụ site na ngwa nke Atresmedia (Antena 3 na La Sexta) anyị nwere ike ịnụ ụtọ n'oge ọ bụla mmemme kacha mma na usoro kachasị mma, anyị nwekwara ike ichefu banyere nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi na ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ mgbasa ozi na-agbasa naanị na mbido vidiyo anyị bụ aga egwu.
Na-agagharị n’ Internetntanet na-ahapụghị n’ihe ndina ya
Otu n'ime ọtụtụ Smart TVs anyị nwere ike nweta taa n'ahịa ha nwere websaịtị arụnyere nke na - enyere anyị aka ịntanetị na - enweghị ịga site na sofa. Nke a ga - enyere anyị aka ịgụ akwụkwọ akụkọ, ịnụ ụtọ weebụsaịtị anyị kachasị amasị ma ọ bụ lelee ihu igwe n'oge ọ bụla.
N'ezie, ọ bụrụ na iru eruola n'isiokwu a ma na ị kpebielarịrị na ị ga-azụta Smart TV, zụtakwa eriri ikuku ma ọ bụ òké iji nwee ike ịnyagharịa yana n'ozuzu rụọ ọrụ ọ bụla na mfe ma dị mfe ụzọ.
Nweta ma netwọkụ mmekọrịta gị
Netwọk mmekọrịta aghọwo ihe dị mkpa na ndụ ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike iji ụbọchị ole na ole na-enweghị ịgwa ha Facebook ma ọ bụ ya Twitter. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịjụ akụkọ niile nke netwọkụ mmekọrịta gị n'ụzọ dị mma, ekele na Smart TV ị nwere ike ime ya n'ụzọ dị mma ma dị mfe. Na mgbakwunye, na ime ka ọ dịrị gị mfe ntakịrị, ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta nwere ngwa ha iji wụnye ya na ngwaọrụ nke ụdị a.
N'ezie, dịka anyị kwurula na ngalaba gara aga, ọ karịrị karịa ka akwadoro ka ị zụta kiiboodu na-enweghị eriri ma ọ bụ oke iji jikwaa onwe gị nke ọma.
Nwee ọtụtụ egwuregwu
Imirikiti ndị na-emepụta Smart TV etinyela ụlọ ahịa ngwa na ngwaọrụ ha, nke ọ bụghị naanị ngwa nwere ike ibudata kamakwa ụfọdụ egwuregwu ndị ọzọ, ọ bụghị oke mgbagwoju anya, mana nke ahụ ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ obere oge. Ọzọkwa na egwuregwu ụfọdụ ụmụntakịrị nọ n'ụlọ ga-enwe ike ịnụ ụtọ nke ukwuu.
N'oge a ọnụ ọgụgụ nke egwuregwu dị maka ụdị ngwaọrụ dị oke alaỌ bụ ezie na n'oge a Smart TVs ka nwere akụkọ mkpirisi na ahịa, ya mere, a ga-atụ anya ya na oge nke oge na egwuregwu ọhụrụ ga-amalite ịdị, gụnyere ụfọdụ ndị kachasị ewu ewu na ahịa.
Ọkụ ọdịnaya ọ bụla
Ọtụtụ telivishọn ndị na-abụghị Smart TV nwere ugbua ọdụ ụgbọ USB dị na nke, dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike igwu ọdịnaya dị iche iche site na, dịka ọmụmaatụ, draịvụ ike ma ọ bụ ebe nchekwa dị na mpụga. Igwe onyonyo ndị a nke na-enye anyị ohere ijikọ na netwọk nke netwọkụ, nwekwara otu ọdụ ụgbọ USB ma ọ bụ karịa nke na-enye anyị ohere ịdekọ ọdịnaya ọ bụla..
Ọ ga-ezu iji jikọọ diski ike ma mee obere mgbanwe ole na ole na ntọala ahụ, anyị ga-enwe ike ịdekọ mmemme ọ bụla, ihe nkiri ma ọ bụ usoro telivishọn nke a na-agbasa na ọwa ọ bụla. Mgbe ahụ ị ga - enweta diski ike iji nwee ike mụta nwa na ọdịnaya edere ede.
Tụgharịa Smart TV gị ka ọ bụrụ ebe mgbasa ozi
Smart TVs nwere ọtụtụ ngwa dị iche iche, dabere na onye ọrụ ọ bụla. Otu n'ime ngwa ndị ahụ bụ nke ike gbanwee ngwaọrụ gị na ebe mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ị nwere telivishọn jikọtara na Internetntanetị, ị ga-enwe ike ịlele foto gị ma ọ bụ vidiyo gị n'oge ọ bụla, nke ị debere na telivishọn ma ọ bụ na ngwaọrụ mpụga ọ bụla.
Na mgbakwunye, na ekele maka eziokwu na anyị ga-ejikọ na netwọk nke netwọk n'oge ọ bụla anyị nwekwara ike ịnweta, na-enweghị nsogbu ọ bụla, na, dịka ọmụmaatụ, foto ndị anyị chekwara na igwe ojii. Ọbụna ụfọdụ ọrụ igwe ojii a kacha mara amara nwere ngwa ha maka Smart TV dị iche iche n'ahịa, nke doro anya na-eme ka ihe niile dị ntakịrị mfe.
A ọnwa ole na ole gara aga, m nwere ohere ịzụta a Smart TV na a pụtara ọnụ ala price na ọ bụ ezie na na mbụ m nwere nnọọ ole na ole obi abụọ, m mechara kpebie ịzụta ya, ọ bụ ezie na ebumnuche nke iji ya dị ka otu n'ime TVs nke a ndụ niile. Mana, ozugbo ọ bịarutere n’ụlọ m, ọnwụnwa ahụ siri ike karịa ebumnuche m ma jikọọ ya na quicklyntanetị ngwa ngwa iji hụ ihe m nwere ike iji ya mee.
Kemgbe ụbọchị ahụ, abụ m onye na-agbachitere ụdị ngwaọrụ a na mgbe ọ bụla m nwere ike, m ga-akwado zụọ ọ bụla enyi ma ọ bụ onye otu ezinụlọ. Enwere m Smart TV m jikọtara site na netwọk WiFi, na-ezere eriri n'akụkụ niile, ihe na-enweghị mgbagha dị mma. On telivishọn m arụnyere nile di iche iche nke ngwa na-eme ọtụtụ narị ihe, ọ bụ ezie na ndị kasị amasị m bụ Netflix na niile ngwa si dị iche iche telivishọn ọwa gburugburu ụwa. N'ụlọ m ọ dịwo ogologo oge kemgbe ha kwụsịrị itinye telivishọn nke ndụ na mgbe anyị chọrọ ịhụ ihe anyị tụgharịrị na Netflix ma ọ bụ telivishọn na-achọ.
Obi abụọ adịghị ya, ma ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụ na-enwe obi abụọ banyere ịzụta Smart TV, enweghị m ike ịme ihe ọ bụla ọzọ karịa ịgba gị ume na ohere ọ na-enye anyị, ma ndị anyị na-amasị televishọn na ndị na-achọghị, dị nnukwu. Tụkwasị na nke ahụ, otu uru dị ukwuu bụ na ọnụahịa nke ụdị telivishọn ndị a adịghị oke oke ma taa ị nwere ike ịzụta ngwaọrụ nke ụdị a na-ahapụghị gị ụgwọ ọnwa nke ọtụtụ ọnwa.
You nwere ike inye anyị ihe ọzọ kpatara ị ga-eji zụrụ gị Smart TV?. Gwa anyi na oghere edebere maka ikwu na post a ma obu site na otu netwọkụ ndi mmadu ebe anyi no ma gwa anyi onye. bụ isi ihe kpatara dugara gị ịzụta telivishọn ị nwere ike jikọọ na netwọk nke netwọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ebumnuche 7 ịzụta Smart TV n'echeghị echiche maka oge
Mbadamba Amazon ọhụrụ pụtara na FCC
Sọpụrụ 8, ezigbo mma nke ndị nrụpụta China ruru Europe